Ukukhuthaza ukuThengisa kunye nokuPhuculo kwezi Hacks zintandathu | Martech Zone
Yonke imihla, kubonakala ngathi sinexesha elincinci lokujongana nomsebenzi wethu. Kuyaphazamiseka kuba zininzi iiapps, iihacks kunye nezixhobo ezisinceda ukuba songe ixesha kule mihla. Kubonakala ngathi zezona ngcebiso kunye namacebo afanele ukusongela ixesha eneneni athabatha eyona rhafu kwimveliso yethu.
Nazi ezinye zeendlela kunye nezixhobo endizisebenzisayo ukuzisindisa kunye neqela lam lokuthengisa kunye nexesha kunye nokuphucula imveliso yethu iyonke.
Hack 1: Landelela ixesha lakho ngokwenkolo
Ndisebenza kude ukudlula iminyaka eli-10 ngoku kwaye ndiyayicekisa ingcinga yokulandela ixesha lakho njengoko usebenza. Andikaze ndiyisebenzise ukujonga abasebenzi bam, kodwa ndiyifumene inokuba luncedo ngokwenene kwezinye izicelo.
Malunga nenyanga, ndililandelele ixesha lam kuwo wonke umsebenzi endiwenzileyo. Kwimisebenzi enzima njengokusebenza kwisicwangciso sokuthengisa kwinto elula njengokubhala i-imeyile. Ndikhuthaze abasebenzi bam ukuba benze njalo kwinyanga enye, bazenzele ezabo iirekhodi. Iziphumo zavula amehlo.
Siye saqonda ukuba lingakanani ixesha lethu elimosha ngemisebenzi engenamsebenzi kwaphela. Ngokubanzi, sichithe ixesha lethu elininzi sibhala ii-imeyile nakwiintlanganiso, sisenza umsebenzi omncinci kakhulu. Nje ukuba siqale ukulandelela ixesha lethu, sikwazile ukubona ukuba lingakanani na ixesha lethu elichithwe. Siye saqonda ukuba iqela lethu lokuthengisa lichithe ixesha elininzi kakhulu lingenisa idatha kwiCRM yethu endaweni yokuthetha namathemba kunye nokuthengisa yethu Isindululo sesoftware. Siphele sigqibezela ngokupheleleyo inkqubo yethu yokuthengisa kunye nolawulo lweprojekthi yokuhamba komsebenzi ukuze sibe nexesha elifanelekileyo.
Izindululo ezingcono zikwenza ukuba wenze izindululo ezintle, zala maxesha ngemizuzu. Izindululo ezenziwe ngesixhobo zisekwe kwiwebhu, ziyalandeleka kwaye ziguqula kakhulu. Ukwazi xa kuvulwa isindululo kukunceda ulandele ngexesha elifanelekileyo, kwaye uyakufumana isaziso xa isicelo sikhutshelwa, sisayinwe okanye sihlawulwe kwi-intanethi. Ngokuzenzekelayo ukuthengisa kwakho, bonisa abathengi bakho kwaye uphumelele ishishini.
Bhalisela iizindululo ezingcono simahla
I-Hack 2: Yitya iFrog ebukhoma?
Okokuqala, andikukhuthazi ukuba utye amasele aphilayo. Kukho isicatshulwa esidumileyo sikaMark Twain owathi kufanelekile yitya isele eliphilayo into yokuqala ekuseni. Ngale ndlela, wenze eyona nto inokwenzeka inokwenzeka ngemini kwaye yonke enye into eyenzekayo inokuba ngcono kuphela.
Isele lakho eliphilayo ngowona msebenzi ungalunganga uhleli phezulu kuluhlu lwezinto oza kuzenza. Kum, ilawula amatikiti enkxaso kubathengi. Rhoqo kusasa xa ndikhanyisa ilaptop yam, ndinikezela iyure okanye ezimbini ekufundeni nasekuphenduleni kwii-imeyile zabathengi. Ukuphumla kwemini kuvakala ngathi yimpepho. Kwiqela lam lokuthengisa, ndincoma ukwenza into efanayo. Abantu abohlukeneyo banezimvo ezahlukileyo zento yabo phila isele kunjalo, ke andicebisi ukuba ngowuphi owona msebenzi, kodwa ndicebisa ukuba wenze eyona nto inzima, eyona inzima ekuseni.
I-Hack 3: Sebenzisa ubungqina boLuntu kwiWebhusayithi yakho
Ukufumana ukuthengisa ngakumbi ngexabiso lokuthengisa kunye nemali. Ngapha koko, ukuza neendlela ezintsha zokufumana abathengi kufuna uphando oluninzi kunye nokusebenza nzima. Kodwa kukho indlela yokufumana ukuthengisa ngakumbi ngaphandle kokuchitha nayiphi na imali eyongezelelweyo- usebenzisa ubungqina boluntu.
Le ndlela yokuthengisa iphandwe kakuhle kwaye yangqinwa ukuba iyasebenza kumashishini ahlukeneyo. Ukubeka ngokulula, kuya kufuneka usebenzise amava abathengi akhoyo kunye nophawu lwakho ukwenza abathengi abaninzi basebenzise imali nawe.
Iindidi ezaziwayo zobungqina boluntu zibandakanya uphononongo, ukuqinisekiswa, ubungqina, izaziso zokuguqula kunye nabanye abaninzi. Kukho iindlela ezininzi zangoku ezifana nezaziso zokuguqula.
Ukuba sele unabathengi abonelisekileyo, ukusebenzisa amava abo kwindawo efanelekileyo kwiwebhusayithi yakho kunokwenza impembelelo enkulu kumanqanaba akho okuguqula kunye neenombolo zokuthengisa. Nangona kunjalo, akukho bukhulu-bunye-isisombululo sonke kwaye kuthatha uvavanyo oluthile ukufumana ifomula yobungqina eluntwini. Iindaba ezimnandi kukuba, iyasebenza kwaye isebenza kakuhle.
Ukuqhekeza 4: Thatha ukuThengiswa kwi-Intanethi
Amaqela amaninzi okuthengisa asasebenzisa indlela yesiNtu apho afuna ukuhlangana khona nomntu ngaphakathi ukuze avale isivumelwano. Ngelixa oku kunezibonelelo ezininzi, kukho ukwehla okubonakalayo nako. Ngalo lonke ixesha uphuma usiya entlanganisweni, ulahlekelwa lixesha kunye nemali, ngaphandle kokwazi ukuba intlanganiso iya kujika ibe yintengiso.
Kukho izixhobo ezininzi kule mihla ezenza kube lula ukuvala ukuthengisa ukude. Ukuqhuba ii -apps ezinje nge Zoom vumela ukuba wenze umnxeba wevidiyo ngaphambi kokulungiselela intlanganiso ngobuqu. Ngale ndlela, nokuba awuyifumani intengiso, uya kuphulukana nemizuzu eli-15 yexesha lakho endaweni yosuku lonke ukutyelela ithemba.
Ukuqhekeza 5: Ukulungelelanisa iiNtengiso zakho kunye namaQela oThengisa
Kwiinkampani ezininzi endandizisebenzela, inkqubo yokuthengisa yayixhonyiwe ngenxa yesizathu esinye esilula. Isebe lezentengiso lalingenalo nofifi lokuba isebe lezentengiso lenza ntoni na ngomxholo kunye nezinto zalo zentengiso kwaye kwangaxeshanye, isebe lentengiso alinaso nofifi malunga nokuhlangana nokuthengisa yonke imihla. Ngenxa yoko, ulwazi oluninzi luyalahleka kwaye omabini amasebe aqhuba kakubi.
Ukugcina omabini amaqela kwiphepha elinye, kubalulekile ukuba neentlanganiso rhoqo apho iqela lokuthengisa kunye nelokuthengisa likhokelela kwaye amalungu anokuhlala kunye axoxe ngokwenzekayo kwisebe ngalinye. Ukuthengisa kufuneka kwazi malunga nonxibelelwano abathengisi abanalo kunye nabathengi. Kwangelo xesha, ukuthengisa kufuneka kwazi malunga nomxholo ojolise kubathengi kutshanje ukuze bakwazi ukulungelelanisa indlela yabo xa benxibelelana namathemba amatsha. Konke okuthatha yimizuzu eli-15 ngeveki kwaye zombini zakho unxibelelwano lweqela nemveliso iya kuphucuka.
I-Hack 6: Yiba ngqongqo ngakumbi kwiintlanganiso zokuthengisa
Ukuba umntu ovela kwiqela lokuthengisa unentlanganiso nabathengi abanokubakho, banalo lonke ixesha emhlabeni. Nangona kunjalo, kwiintlanganiso zangaphakathi, ixesha lethu lilinganiselwe. Uyalikhumbula ixesha elilandelelweyo esilwenzileyo? Sifunde ukuba sichitha iiyure ezine evekini kwiintlanganiso ezingancedi nto kwiinjongo zethu zokuthengisa.
Kule mihla, sibeka umda kuzo zonke iintlanganiso zethu ukuya kwimizuzu eli-15 ubukhulu becala. Nantoni na engaphaya kokufanele i-imeyile kwaye luphawu lokuba i-ajenda yentlanganiso ayimiselwanga ngokufanelekileyo. Eyethu Ukuxabisa umsebenzi ungene eluphahleni kwaye sigcina iitoni zexesha kule mihla- enkosi kule nto ilula.
Iqela elikhulu lokuthengisa liyimfuneko kwinkampani efuna ukunyusa ingeniso kunye namandla okukhula. Ezi zezinye zeendlela eziphambili esizisebenzisayo ukuqinisekisa ukuba iqela lethu lokuthengisa linemveliso kangangoko kunokwenzeka, kwaye ndiyathemba ukuba uyifumana iluncedo. Mhlawumbi eyona nto ibalulekileyo yokuthabatha apha kukuba ayisiyiyo yonke imveliso yokuqhekeza ithumba ezenzekelayo kunye netekhnoloji ephezulu- ungafezekisa izinto ezimangalisayo ngokutshintsha ezinye zeendlela zakho kunye nemikhwa.
tags: izaziso zenguquleloiziphakamisointengiso kunye nokulungelelaniswa kwentengisoinkomfa kwi-intanethikwiidemo ezikwi-intanethiukuthengisa onlineisilulekoIsindululo sesoftwareReviewsulungelelwaniso lokuthengisa kunye nentengisoiintlanganiso zentengisoimveliso yentengisoisindululo sentengisoIzindululo zokuthengisaukulandela umkhondo wentengisoubungqina boluntuUbungqina
UAdam Hempenstall yi-CEO kunye noMsunguli wezindululo ezingcono, isoftware yesindululo esilula yokudala izindululo ezintle, ezinefuthe eliphezulu kwimizuzu. Emva kokuba encede abathengi bakhe kwiZindululo ezingcono ukuba baphumelele i-120,000,000 yeedola + kunyaka omnye kuphela, usungule iYunivesithi yokuBhala yesiCwangciso sokuqala apho abelana khona ngezona zindululo zishishini.